Tag: Muuqaalka Muuqaalka Outlook.com (Firefox) | Martech Zone
Tag: Outlook.com (Firefox) eegis emayl
Ku noqo Jidka vs 250ok: Email Soo-Saarista Barnaamijka iyo Adeegyada
Talaado, Agoosto 16, 2016 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Maxay email u gudbintu muhiim u tahay? Sida ku xusan Warbixinta 2015 Isbeddellada Tayada Xogta Emailka ee Experian, 73% suuqleyda ayaa soo sheegay inay qabaan arrimo la xiriira soo gudbinta emaylka. Jidka Soo-celinta ayaa soo warisay in ka badan 20% e-mayl sharci ah la waayey. Shaki la'aan, ganacsiyada waxay la kulmaan dhibaatooyin xagga samatabbixinta, taasina waxay si xun u saameyneysaa khadka hoose. Muddo sanado ah, Jidka Soo-noqoshada wuxuu ahaa hogaamiyaha warshadaha ee booska emaylka la gaarsiin karo iyada oo aan wax badan, haddii ay jiraan, tartan. Imaatinka 250ok, iyo a